Gemma di Ribera: na-ahụ n’enweghị ụmụ akwụkwọ. Ọrụ ebube nke Padre Pio | Blọọgụ nke ekpere
Gemma di Ribera: na-ahụ na-enweghị ụmụ akwụkwọ. Ọrụ ebube nke Padre Pio
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 17, 2020 Maggio 17, 2020
si Giornale di Sicilia nke 20 nke November 1952
Oge anyị abụghị oge ọrụ ebube, ọdụ, mmiri na-adịghị mma, nke na-enye ìhè dị ka bọmbụ atọm na Napalm; ọ bụ oge ime ihe ike, agụụ ịkpọasị siri ike; ihu igwe isi awọ; Ọ dịbeghị mgbe ụmụ nwoke putara na ha bụ ndanda.
Na mmebi nke ọtụtụ nkwenkwe, nke ọtụtụ akụkọ ifo, na ọbịbịa nke nkwenkwe ndị ọzọ na akụkọ ifo ndị ọzọ, a na-ahụ mmụọ mmụọ nke mmadụ niile mara, ka omume dị obere, ka usoro ahụ na-eme ka anyị dị ike na mbibi ahụ.
Site na mgbawa ọ bụla, na nyocha ọ bụla karịrị ihe mgbochi nke ụda nke amaghị ama, a na-atụgharị mpako nke oge ochie nke amamihe nke ike dị ka nwoke nke oge a, echefuteghachi etu ọdịghị oke ma oke ala na enweghị njedebe. obere-nwa-ya nke ebighi-ebi nke Chineke.
Ọ bụ n'ọzara kwa ụbọchị nke anyị niile na-efunahụ anyị obere, na-enweghị atụ, n'agbanyeghị mbọ niile na okwukwe niile: igwe mmadụ na-adọta onye ọ bụla oge ị evena ntị na ịmụrụ anya.
Olile anya di otua ma odi kwa nkpa maka ndi maara otu esi acho ike iji si na gora ndi nwuru anwu bia oge. N’etiti ndị a nwere isi udo a ga-enwerịrị ndị nta akụkọ ole na ole, ebe ọ bụ na agbụ na-ekekọta anyị kwa ụbọchị na ọrụ ahụ, ma sie ike, sie ike karị, dịkwa mkpụmkpụ.
Ma na oge niile na ndụ maara etu esi ejide anyị n'aka wee gosi anyị akụkụ nke eluigwe; anyị na-ahụ ya n’ihu anyị n’ebughi ụzọ hụ ya, n’ebe ndị n’oge dị iche iche n’oge a na-atụghị anya ya: taa anyị hụrụ ya na Naro, n’anya onye obere nwa na-erubeghị afọ iri na atọ, onye soro ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-egwuri egwu. ọ nwere aha doro anya nke Immaculate Conception.
Ndị na-anọ n'ebe dị anya na-ele ya anya, ọ bụrụ na ha amaghị ihe ọ bụla, ha enweghị ike ịghọta ihe ọ bụla dị egwu; mana ọ bụrụ na anyị abịaru nso ma kwuo maka Gemma nke ihe klaasị ya, ma ọ bụ nke onye ụkọchukwu parish nke mere ka a nabata ya ma ọ bụ nke ndị nọn ndị nọ ya nso, anyị na-ahụ n'okwu ndị ahụ, na mmegharị ahụ, ọ nweghị nke olu ahụ n'onwe ya, ihe ... Ikekwe nke anyị bụ echiche dị mfe nke onye maara "akụkọ Gemma" ... Ọ dị ya ka ọ nwere ọ joyụ nke otu ụtọ na-atọ ụtọ na agba na ụdị; ka emere ka ekezu ya dum, mgbe] nwant darkness] ma nke] cha nke light naenweghi ike.
A mụrụ Gemma dị ka onye kpuru ìsì, ma tolite na obere ụlọ arụrụala na-enweghị ụfụ maka nne na nna ya.
O noro ya nso na ihunanya ahu idebe n’enweghi oke nke na-eme ka nchebara echiche obula di na abuo, nne nne Maria nke duuru ya n’aka, gwara ya okwu banyere ndu o si agbaputa ya n’ebe di anya, banyere udi, agba.
Gemma mara ihe ndị emetụtaghị aka, site na olu nne nne Maria: ụgbọ ala nke ọ nụrụ mkpọtụ Argentine, ebe ị na-ekpe ekpere, madonnina nke ụka, ụgbọ mmiri na-asọgharị n'oké osimiri Agrigento ... ụwa, na nkenke, bụ n'ihi ụda ya ọ na-ege na ọdịdị ya na-egosi ya ịhụnanya nke nne nne Maria.
Ọ dị otu afọ mgbe edoro Gemma Galvani nsọ ma nwekwa nnukwu agụụ maka okwukwe nwanyị ahụ ka o doro anya, ya bụ na anya ya dara ogbenye dị ka ọchịchịrị, n'ihi na enweghị nwa akwụkwọ.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị Gemma malitere ịhụ ìhè ahụ: ọ erute nnukwu ọrụ ebube mbụ, ihe ederede dị nsọ nwere okwu anọ na - enweghị njedebe: ìhè ahụ dịkwa.
Ọ nwere ike ịghọta nkọwa nne nne ya nke ọma: mana ndị dọkịta nọ na-enwe obi abụọ ma onye ọ bụla mechara kwenye na okwu nke ọkụ nke Gemma bụ mkpụrụ dị mma na ntinye ezinụlọ.
Na 1947 Gemma dị afọ asatọ, ọ na-amalite inwe mmetụta miri emi karị ihe nkiri nke ọdachi ya; okwu ya dara mba n’obi, ajụjụ ya karịa.
Nne nne ochie Maria jidere aka otu ụbọchị ma were ya banye ụgbọ oloko ochie na-akwụ anwụrụ ọkụ.
Ọ na-ekwu ogologo oge banyere ọtụtụ ihe ọ hụrụ, ọtụtụ maka ya onwe ya, ọ na-ekwukwa maka Strait, nke Madonnina messinese, mgbe ọ ka na -ekpe ekpere n'ime obi tupu ọ banye n'ụgbọ ọzọ nke ga-akpọga ha abụọ San Giovanni Rotondo nke Padre Pio.
Nne nne ochie mechara daa ụra na-ejide Gemma n'aka ma ọ hụghị ka ọ na-agba ọsọ na Foggia n'oké osimiri nke ọzọ ahụtụbeghị m.
Na mberede, olu Gemma jiri nwayọ wepụrụ ya iyi: obere nwa nwanyị ahụ kwuru okwu nwayọ nwayọ, banyere ihe ọ hụrụ na agadi nwanyị nọ n'ụra, soro okwu ya dịka ezigbo echiche na-akasi obi ... Mgbe ahụ otu na mberede o wuliri anya ya elu mepere emepe: Gemma tiri mkpu ka ọ hụ nnukwu ụgbọ na-ese anwụrụ n’elu oke osimiri na nne nne Maria hụkwara, na igwe Adriatic na-acha anụnụ anụnụ, onye na-ekuru mmiri na-eji nwayọọ na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri.
O wee bụrụ na ụgbọ okporo nkịtị, nke ndị jupụtara n'ụra, na-adọpụ uche, ndị isi ha juputara na ụtụ, ụgwọ, ụgwọ na nnukwu uru, tiri mkpu.
Ọ bụ ọgba aghara n'akụkụ niile na mgbịrịgba mkpu kụrụ n'oge na-adịghị anya: Gemma hụrụ!
Nonna Maria chọrọ ịga Padre Pio na agbanyeghị: ọ bịarutere n'ekwughị onye ọ bụla, ya na Gemma n'aka ọ kwụsịrị, jiri ndidi na-eche oge ya.
Nne nne Maria kwesiri inwe ihe omuma nke St Thomas Onyeozi: o lekọtara nwa nwa ya maka egwu na o ghaghi ime ihe ojoo.
Mgbe Padre Pio bịarutere, ọ kpọrọ Gemma ozugbo ma kwupụta nke mbụ ya. Nwatakịrị nwanyị ahụ gburu ikpere n’ala kwuo okwu banyere obere ihe nke mkpụrụ obi ya na Padre Pio zara ya na ndị na-anaghị anwụ anwụ na ndị na-efe Chineke: ma nke ahụ ma nke ọzọ ahụghị oge ilekọta ahụ, ma ọ bụ anya ha hụrụ ugbu a…
Nne nne m Maria, mgbe ọ nuru na Gemma agwaghị Padre Pio maka anya ya, ọ gbara ama; ekwughi ihe ọ bụla, weghaara ọzọ, na-eche ikwupụta ya.
Mgbe a tọhapụchara ya, o welitere ihu ya site na nnukwu ihe ịtụ n'anya nke ndị ọrụ nzuzo ahụ lere anya n'ọchịchịrị nke friar ogologo oge ... Okwu ndị a gbara ya n'egbugbere ọnụ ya ... N'ikpeazụ, ọ sịrị: "Nwa nwa m, ị hụghị anyị ..." Ọ gara n'ihu na-atụ egwu ịgha ụgha.
Padre Pio lere ya anya na anya na enwu na amuma ojoo: mgbe ahụ o weliri aka ya wee na-ekwu, "Gịnị ka ị kwuru, obere nwa nwanyị ahụ na-ahụ anyị ...!".
Nne nne ochie Maria gara Gemma na ibe ya n'enyereghị ya aka, na-elezi ya anya nke ọma. Ọ hụrụ ka ọ na - agagharị na - enweghị atụ edoghị anya nke neophyte, na - ele nnukwu na obere ihe na akpịrị ịkpọ nkụ na - adịghị agwụ agwụ ...
Mgbe ha na-alaghachi, nne nne Maria nwere oke nchegbu na ọ na-arịa ọrịa ma kwesiri ịnabata ya n'ụlọ ọgwụ Cosenza. Nye dọkịta ahụ ọ sịrị na ọ dịghị mkpa ileta ya; kama nwa nwa ya nwanyị nwere anya mgbu.
Enwere ezigbo nsogbu ngagharị kaadị ụfọdụ ihe isi ike, mana dọkịta mechara nyefee Gemma: “mana o kpuo ìsì. Onweghi nwa akwukwo. Ogbenye dara ogbenye. Ụzọ adịghị".
Science kwuru nwayọ ma nne nne Maria lere anya, na-ele anya, na-enyo enyo.
Mana Gemma kwuru na ya hụrụ anyị, dọkịta ahụ gbagwojuru anya wepụtara uwe, wee pụọ obere wee gosi iko ya, okpu ya, nke ihe akaebe juru ebe niile, wee na-eti mkpu. Ma nne nne Maria gbara nkịtị na Padre Pio ekwughi ihe ọ bụla.
Ugbu a Nonna Maria gbara nkịtị; mgbe ọ lọtara n’ụlọ ọ na-arụsi ọrụ ike ozugbo maka Gemma ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ iji nwetaghachi oge ahụ furu efu; o nwere ike iziga ya Naro site na ndị nọn ọ nọrọ n'ụlọ na mama na papa na foto Padre Pio.
Nke a bụ akụkọ banyere anya abụọ na-enweghị nwa akwụkwọ, nke nwere ike otu ụbọchị sitere na ọkụ nke nwatakịrị n'ụzọ doro anya site n'ike nke ịhụnanya.
Akụkọ nke yiri ka ewepụrụ ya na akwụkwọ ọrụ ebube nke mgbe ochie: ihe na-abụghị n'oge anyị.
Mana Gemma nọ na Naro nke na-egwu egwu, onye dị ndụ; nne nne Maria nọ n'ụlọ Ribera nwere ihe osise Padre Pio. Onye obula choro gha aga ma hu.
← Na post gara aga Gara aga post:Fatima: ka onye obula kwenyere, ihe nlere nke anwu anwu
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa etu i si enweta mkpagbu na ndụ gị